ụlọ akwụkwọ ọhụrụ ụlọ akwụkwọ ọhụrụ
5 Nzọụkwụ Iji Nyochaa 10 Afọ Ntà
Site Steve & Becky Holman
Ị maara na mgbe ị kụrụ afọ iri anọ, ma ị bụ nwoke ma ọ bụ nwanyị, ahụ gị na-amalite ịka nká karịa ka ọ dị? Nnyocha egosiwo na na-enweghị nri na mmega kwesịrị ekwesị, ahụ gị ga-abụ ihe dị ka ọnwa 6 EXTRA maka afọ ọ bụla gafere. Chee echiche! Ọ bụrụ na ị dị afọ iri anọ, nke ahụ pụtara site n'oge ị kụrụ 44 ị ga-ahụ anya ma chee 48. Site n'oge ị ruru 60, ị ga-ahụ ma tụọ afọ iri asaa na asaa! Anyị na-ahụ nke a kwa ụbọchị ... naanị lee anya gburugburu gị.
Ị maara na 90% nke ndị mmadụ karịa afọ 35 na-efunahụ nkwonkwo kwa afọ iji gbaa ihe karịrị narị anụ anọ ọzọ? Nke ahụ pụtara na ọ bụghị nanị na ị ga-atụfu naanị ihe dị n'ahụ gị nke na-emepụta ọdịdị, ụda, na ike-ị na-enweta abụba kwa afọ, ọ bụrụgodị na calorie gị dị otu .
Ndi ama ọfiọk ke kpukpru n̄kpọ emi ẹkeme ndinam ke kpukpru isua? Na e nwere ụzọ dị iche iche ị ga-esi gaa, rie, ma chee na gwa ụbụrụ gị ka ị kwụsị usoro ịka nká a ... na ọbụna SLOW IT DOWN ruo isi ebe ị na-eme nká karịa otu afọ maka afọ ọ bụla? Nke ahụ pụtara na ị nwere ike ịchọta obere na 40 karịa ị na-eme na 35 ... ma ọ bụ ma ọ bụrụ na ị dị ka Becky na m, tọrọ na 50+ karịa anyị mere na 40!
mgbochi ịka nká omume
Nke a abụghị okwu efu. Nke a anaghị achọ ka ịṅụ ọgwụ ọjọọ, ọgwụ mgbakwunye, ma ọ bụ gimmicks. Na, ọrụ a maka onye ọ bụla, nwoke ma ọ bụ nwanyị, na-arụ ọrụ n'oge ọ bụla. 35, 45, 55, 65, 75 ... ị na-akpọ ya. Usoro ihe omumu bu otu ihe.
Afọ m dịka nchịkọta editọ na Iron Man Magazine enyerela m aka ịbanye n'ime usoro nzuzo ndị ọkachamara na-eme agadi . Kemgbe ọtụtụ afọ, mụ na Becky ejirila ọtụtụ ndụmọdụ, aghụghọ, na atụmatụ ndị na-eme ka anyị gbanwee usoro ịka nká , ma ọ dịkarịa ala site na larịị cellular. Nke ahụ pụtara ahụ anyị, na-eche, ma na-eme ka anyị dị obere karịa oge anyị.
Anyị akụziwo usoro a nye ọtụtụ ndị ikom na ndị inyom ruo ọtụtụ afọ, ọ na - amalitekarị site na ụkpụrụ ise ndị a ị ga - etinye iji mee ka nsogbu nke ịka nká na - aga n'ihu, gbanwee ya, wee malite "ịka nká na azụ "site na iweghachite ihe omimi nke ndị ntorobịa.
Nke ahụ kwuru, anyị ga-adọ gị aka ná ntị: Ihe ị ga-anụ nwere ike ịga megide ihe oriri niile na ndụmọdụ ahụike ị na-anụ. Nke ahụ bụ n'ihi na ụwa nwere, na-ekwu okwu n'ezoghị ọnụ, na -agba nro! "Ozuzu ọzụzụ", yoga na-ekpo ọkụ, klaasị ntụgharị, ọ bụrụ na ihe ndị a nile dị mma, ma ha agaghị eme ka ịka nká, ma ha agaghị eme ka ahụ gị ma ọ bụ belata ahụ ike. Ụzọ adịghị!
ụlọ akwụkwọ ochie ụlọ ọhụrụ f4x
Uzo ise a na-ekpughe ihe ị ga - eme. Ọ BỤ na ị chọrọ ịkwụsị usoro ịka nká, gbakee ike gị, ma nweta ahụ gị dị mma.
Ihe ị chọrọ bụ mmetọ nke mmiri oyi, aka nke Old School, na eziokwu eziokwu ahụ.
Ụda ọma? Ka anyị dive!
Nzọụkwụ 1: Echefụ Nri Na-abaghị Ala
Ọkụ dị ala abụwo ihe dị iche iche kemgbe afọ ọtụtụ iri ma lee anya gburugburu. Kedu ihe nwere ndụmọdụ dị oke mma nke ndụmọdụ a maka ozu ndị ị hụrụ? Anyị na-ada ụra, na-arịa ọrịa, na shuga na carbs karịa karịa oge ọ bụla ọzọ n'akụkọ ihe mere eme. Na, anyị na-agafe àgwà ndị a nye ụmụ anyị.
A gaghị atụ egwu abụ - ha ga-anabata ya. Ha adịghị eme gị ka ị bụrụ abụba; kama nke ahụ, ha na-enyere ahụ gị aka ịchịkwa hormonụ ike gị . Testosterone, hormone 'ike', dịka ọmụmaatụ, bụ kpọmkwem n'ihi cholesterol na oriri na-eri nri . Nke ahụ ziri ezi: "Cholesterol" abụghị okwu ruru unyi! Ahụ gị chọrọ abụba nri na cholesterol iji mepụta MGBE ọ bụla na hormones dị mkpa.
Ndị mmadụ na-eri nri dị ala na-adọrọ mmasị, ndị na-adịghị mma, na ndị na-adịghị ike. Ha na-arịa ọrịa mgbe ụfọdụ, mgbe ụfọdụ ka ha na-agbada. Na, ha nwere ike ọ bụghị naanị ụtọ iri nri . A ghaghị ịgụta nri na gram ọ bụla. Ị chere n'ezie na nke a ga - eme ka ị bụrụ nwata? N'ezie obughi ... o ga echegbu gi na onwu ma oburu na o dighi egbu gi na mbu!
© 2017 OldSchoolNewBody.com | Ikike niile echekwabara
Amụma Nzuzo | Okwu & Ọnọdụ | Kpọtụrụ
Mmemme Ọzụzụ F4X